Qubanaha » C/kariin guleed oo wadahadal kula jira qeybo kala duwan si loo dhameeyo xiisadda ka tagaan galmudug.
C/kariin guleed oo wadahadal kula jira qeybo kala duwan si loo dhameeyo xiisadda ka tagaan galmudug.
Jan 15, 2017 - jawaab
Madaxweynaha ay xilka ka qaadeen Xildhibano ka tirsan barlamanka Galmudug oo tiradooda gaareysay 54 Xildhibana C/kariin guuleed ayaa waxaa lagu wadaa in uu xamar kula yeesho kulamo gooni gooni ah odayaasha iyo waxgaradka galmudug iyo xildhibanada labada aqal ee galmudug si loo dhameeyo xiisada ka taagan Galmudug.
C/kariin guuleed ayaa waxaa uu ku soolaabtay magaalada muqdisho kadib markii uu waji wanaagsan uu ka soo waayey Xildhibanadii xilka ka qaaday iyagoo waliba diiday in ay la kulmaan waxaana uu is ku dayey in uu ka carqaladeeyo kulamadooda oo ay ku qabsadaan meel ana aheyn Xarunta barlamanka.
Sidookale C/kariin waxaa uu la kulmayaa madaxweynaha Soomaaliya xasan shiikh Maxamuud si uu ugu sheego wixii uu kala soo kulamay Cadaado iyadoo madaxweynaha uu horey u sheegay in ysan sharci aheyn wixii ka dhacay Cadaado ee Xilka looga qaaday C/kariin guuleed.